Iindaba - Siyavuyisana nokuvulwa kwegosa lethu laseIndiya kwigumbi lokubonisa elitsha kunye nendawo yokugcina
Siyavuyisana nokuvulwa kwegosa elitsha lase-India kwigumbi lokubonisa elitsha kunye nendawo yokugcina
Nge-10th, Jan, 2020, iarhente yethu eIndiya ibambe umsitho wokuvula omkhulu kwigumbi labo lokubonisa kunye nendawo yokugcina izinto. UMphathi Jikelele wethu uMnu. Eric Wong, abameli besebe loomatshini kunye negcisa abazimase umsitho kunye nokusika iribhoni.
I-CEO ye-arhente kuqala yenza intetho yokwamkela iindwendwe ngokubakho kwabo apha kunye nokwazisa malunga negumbi lokubonisa elitsha kunye nombono wabo wophuhliso lwexesha elizayo. Uthi ukukhula kwenkampani akunakufezekiswa ngaphandle kwenkxaso yabathengi kunye nenkxaso yabenzi baseTshayina. Ukuthenjwa kwabathengi kukuphembelela kwabo kwaye ukuthengisa kwamaTshayina kunye nenkxaso yenkonzo kukuzithemba kwabo.
Umphathi wethu uMnu Eric Wong naye wenza intetho ukuvuyisana. Uxelela ukuba sijonge phambili kwinqanaba elingcono neliphezulu phakathi kwearhente nathi. Siza kusindisa nayiphi na imizamo yokuxhasa nangayiphi na into. Ucacise ngokukodwa inzuzo yetekhnoloji esiyisebenzisayo kwimigca yokuxobuka. Singabokuqala ukusebenzisa iiroller zokuqhuba ezibini kunye nezona ziingcali kunye namava kule kude kube ngoku.
Ezona zinto zinomtsalane ngumatshini wokuxobuka kunye noomatshini abachaphazelekayo ababoniswe phambi kwegumbi lokubonisa elitsha kunye ne China ne India iiflegi ezibhabha esibhakabhakeni. Amashumi amawaka eendwendwe eza kuvulwa kwaye ibangela imvakalelo eKerala. Baninzi kakhulu abathengi ababonisa umdla wabo omkhulu koomatshini kwaye benza uphando. Abaphathi bethu kunye neengcali zinceda ukungenisa imisebenzi yomatshini, izibonelelo kunye nokusebenza. Iindwendwe bachukunyiswa kakhulu yiteknoloji ephezulu yokucheba iinkuni. Ngemini enye, iarhente yethu ifumana ubuncinci iiseti ezingama-20 zokucoca iodolo yomatshini kwaye ifumane kwangaphambili.
Ngokwesiko, emva kokugqitywa komsitho, umbuki zindwendwe kunye neendwendwe bonwabela isidlo sasemini esimnandi kakhulu kwaye wonke umntu uxela inzuzo enkulu koku. Ukuvulwa kuza kwisiphelo esiyimpumelelo njengoko besinethemba. Sinqwenela ukuba iarhente ifumane uphuculo olungcono kwiintsuku ezizayo.
Ixesha Post: Jan-10-2020